बिहान आएर बेलुका फर्कंने पर्यटकले इलाममा आतिथ्यता पाएनौ‌ं भन्छन् | tour Khabar
बिहान आएर बेलुका फर्कंने पर्यटकले इलाममा आतिथ्यता पाएनौ‌ं भन्छन्
देवी पौडेल/होटेल एसोसिएसन इलाम
इलाम पूर्वको एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो । दसैंतिहारको समयमा हुने बिदाको सदुपयोग गर्दै इलाम जाने भन्ने योजना धेरैको हुन्छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले होटेल एसोसिएस इलामका अध्यक्ष देवी पौडेलसँग इलाममा दसैंतिहारलाई लक्षित गरेर बनाइएका टूर प्याकेज, इलामका होटेलको अवस्था, इलाममा पर्यटक भित्र्याउन एसोसिएसनले गरेको पहलका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।
० दसैंतिहारलाई लक्षित गरेर इलाम आउने पर्यटकलाई होटेल एसोसिएसन संघले कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?
दसैंतिहारको बीचको सबै होटेल व्यवसाय सञ्चालन हुँदैनन् । धेरै व्यवसायी जिल्ला बाहिरका छन् । जिल्ला भित्रकै भएपनि अलिकति खाली रहने भएकाले मनोरञ्जनका लागि होटेल बन्द गर्ने परिपाटी पनि छ ।
दसैंको मुख्य समय फूलपातीदेखि एकादशीसम्म चाँही धेरै बन्द नै हुन्छ । प्याकेजका लागि यो समयमा अलि गाह्रो भएपनि अन्य समयमा कुनै समस्या पर्दैन । हामीले आठ दिने प्याकेज सञ्चालन गरिरहेका छौं । आठदिने प्याकेजमा इलामलाई घुमाउने योजना छ ।
आठ दिनका लागि १५ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च हुन्छ । यो भ्रमणबाट इलामबारे रिसर्च गर्नका लागि नपुग होला तर, इलामलाई बुझ्नका लागि पयाप्त छ भनेर यो प्याकेज एक वर्षदेखि सञ्चालनमा छ ।
आठदिनमा हामी इलामको लारुम्बा र माङमालुङ बाहेकका इलामका सबै क्षेत्र घुमाउँछौं । भौगोलिक कठिनाईका कारण ती दुई क्षेत्रचाँही आठ दिने प्याकेजमा छुट्छन् । यो प्याकेजमा लन्च, डिनर ब्रेकफास्टसहित गाइडको व्यवस्था हुन्छ । हामी इलामका सुविधासम्पन्न होटलहरुमा नै पर्यटकहरुलाई राख्छौं ।
० कहाँ कहाँ घुमाउनुहुन्छ ?
– हेर्नुहोस पर्यटकलाई प्याकेजमा हिनाउँदा हाम्रो रोडम्याप अनुसार हिँड्नुपर्छ । इलामका त कान्ला कान्लामा पर्यटकीय गन्तव्य छन् । सबै ठाउँमा घुमाउन सकिँदैन । यो प्याकेजमा इलामबजारसहित माइपोखरी, सन्दकपुर, टोड्के झरना घुमाउँछौं । त्यस्तै गजुरमुखी, सिद्धिथुम्का पानीटार र फर्कँदा श्रीअन्तु, कन्याम, पाथिभरा, मंगलबारे बजार, गुफाथुम्की घुमाउँछौं । यता छिन्तापुसम्म पुग्छ ।
प्याकेजमा ग्रुपमा भए एउटा र कम भए अर्को हुन्छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण प्याकेजका ग्रुपमा कम पर्यटक भए बजेट चाँही बढ्ने गरेको छ । ठूलो ग्रुप आएर नेपालको संस्कृतिको बारेमा हेर्न चाहेमा त्यो व्यवस्था पनि उपलब्ध गराउँदछौं । त्यसका लागि रकम चाँही थप लाग्छ ।
एक दिने दुई दिने प्याकेज पनि छन् । त्यो सामान्य नै हुन्छ त्यसमा चाँही गाडी भाडाको समस्याले पूरा बजेट नआउन सक्छ । एक दिने प्याकेजमा इलाम बजार घुमाउने बाहेक अरु गर्न सकिन्छ । पुरानो नगरपालिका भित्र मात्र घुमाउन सकिन्छ । इलाम बजारलाई लक्षित गर्दा दुई दिनको प्याकेज चाहिन्छ । जसमा रक क्लाइमिङसहित सेतीदेवी, भालुढुंगा, पोकले झरनालगायतका स्थानलाई घुमाइन्छ । हिँडेर यि सबै क्षेत्र नपुग्ने भएकाले त्यहाँ गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । गाडी चाहेमा रिजर्भको थप रकम लाग्छ ।
० इलाम प्राकृतिक रुपमा सुन्दर भएपनि पूर्वाधारको विकास छैन । खाना बस्नका लागि राम्रो सुविधा छैन भन्ने गुनासो आउँछ नि ?
– इलाम पहाडी जिल्ला भएपनि यहाँका मानिसहरु धेरै सौखिन छन् । एउटा किसान पनि धेरै सौखिन छ । त्यो तपाईंले यहाँ आएर देख्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले अन्य जिल्लाभन्दा इलाम महँगो छ । तर, मलाई चाँही महँगो लाग्दैन । म धेरैतिर घुमेको छु । धेरै ठाउँमा गएर खाना खाएको छु । काठमाडौं, पोखरालगायतका क्षेत्र हेर्दा इलाम महँगो छैन् । इलाममा घर बन्ने क्रम बढेको छ । धेरैले ऋण लिएर घर बनाउँदा भाडा महँगो भएकाले केही महँगो छ ।
तर, मैले यसलाई व्यवस्थापनका लागि होटेल सञ्चालक साथीहरुसँग छलफल गरेको छु । टूर प्याकेज नभएर पनि इलाम महँगो भएको हो । प्याकेज सञ्चालन भएपछि धेरै सहज हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा पर्यटक आउँदा व्यवसायीहरुले अनुहार हेरेर मनपरी व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ ।
मेरो पनि सानो रेस्टुरेन्ट छ । म गाउँबाट आउनेलाई सय रुपैयाँमा खाना खुवाउँछु । अर्को कोही मान्छे आएर राम्रो खाना भन्छ भने उनीहरुलाई खानाको धेरै परिकार बनाएर खुवाउँछु । त्यसको मूल्य बढी हुन्छ । क्वालिटीका कारणले पनि मूल्य तलमाथि हुन्छ ।
इलाममा भएका खेलकुद कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनेलाई डब्बल बेडमा दुई जना र सिंगल बेडमा एकजना बस्ने गरी आउनेहरुलाई खाना नास्तासहित आठसय रुपैयाँमा राख्ने गरेको छ ।
० इलामले कति पर्यटकलाई धान्न सक्छ ?
कम्तीमा पाँचसय जनालाई राख्न सकिन्छ । पर्यटकको चाहाना अनुसारको सेवा दिएर हामी राख्न सक्छौं ।
० इलामका होटेलमा कोठाको व्यवस्था कस्तो छ ?
–अहिले हामीसँग एक सय ७५ वटा एचेट बाथसहितका रुम छन् । कुनैमा डब्बल र कुनैमा सिंगल बेड छन् । ननएचेट रुम दुई सय ५० भन्दा बढी छन् । अन्य साधारण रुम पनि धेरै छन् । धेरै मानिस इलाम आउने भन्ने भयो भने हामी उद्योग वाणिज्य संघ, पुर्वेली ट्याक्सी व्यवसायी संघ, होटेल एसोसिएसन तथा यहाँको समुदाय नै भेला भएर कति समय र कति पाहुना राख्नुपर्ने हो भन्ने हिसाब गरी हजारौं व्यक्तिलाई राख्न सक्छौं । नजिकैको विब्लाटे बजारमा होटलमा राख्न सक्छौं । नजिकैका गाउँमा भएका होमस्टेमा राख्न सक्छौं । होमस्टेका लागि आधा घण्टाको समय लाग्ने सक्छ ।
समूहमा आउने र सेयरिङमा बस्ने हो भने उनीहरुको इलाम भ्रमण सस्तो हुन्छ । हामीसँग ए, बी,सी गरेर तीन प्रकारका होटल छन् । सी क्लासको होटलमा बसेर ए क्लासको सेवा खोजेर पनि हुँदैन । हामी तीन सय देखि पाँच सय रुपैयाँ लिएर बेलुकाको खाना बस्न र बिहानको नास्ता उपलब्ध छ । यो विद्यार्थीहरुका लागि हो । त्यस्तै पाँच हजार रुपैयाँसम्मका कोठाहरु छन् ।
० सेमिनार, गोष्टिका लागि पर्याप्त सुविधा भएको हल छैन भन्नेहरु पनि छन् ?
–सेमिनार, गोष्टिका लागि पाँच सय जना अटाउने गौतमबुद्ध सभागृह छ । ६० जनाभन्दा बढीलाई राख्न सक्ने होटेलहरु छन् । प्रत्येक होटलहरुमा पाँच/छ वटा हल छन् ।
० यति सुविधा भएपनि इलाम आउने पर्यटकको संख्या त कमी छ । पर्यटक भित्र्याउन तपाईहरुले के गरिरहनुभएको छ ?
–हामीले काम गरिरहेका छौं । म अब भोलि नै भारतको सिलिगुढी जाँदै छु । वेष्ट बंगालमा टुरिजम फियर हुँदैछ । त्यहाँ भारत तथा बंगलादेश र भुटानका मानिसहरु आउँछन् । बंगलादेशीहरु अलि चिसो ठाउँमा घुम्न रुचाउँछन र विश्वका मानिसमध्ये बंगलादेशीहरु अलि घुम्नेको सूचीमा पर्छन ।
अहिले दार्जिलिङ बन्द छ । यो अवस्थामा दार्जिलिङको टेस्ट दिने गन्तव्य इलाम हुनसक्छ । त्यो विषयमा हामी त्यहाँ इलाम, इलामका गन्तव्य र इलामको संस्कृतिका बारेमा प्रचार गछौं । हाम्रो उत्पादनका बारेमा जानकारी गराउँछौं । सन्दकपुर जानका लागि इलाम पनि संगमविन्दु हुनसक्ने विषयलाई हामीले उठाउनेछौं । हाम्रो २० जनाको टोली हुन्छ । पर्यटन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीको टोली जान्छ ।
यसअघि हामीले भारतको कोलकातालाई लक्षित गर्दै चलो इलाम अभियान चलाएको थियौं । त्यसको नेतृत्व मैले नै गरेको थिएँ । त्यहाँबाट पनि इलाम आउनेको संख्या बढेको छ ।
इलामलाई चियासँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ । तर, अहिले हामीले पाथिभराको माटो, माइपोखरीको जल, इलामका गीत समेटेर मेचीकाली यात्रा भनेर एउटा कार्यक्रम गर्ने भन्ने योजना बनाएका छौं । आशावादी छौं त्यसले इलामको पर्यटनलाई ठेवा पुर्‍याउने छ ।
० इलाममा पर्यटकका लागि सारै राम्रो त भन्नुभयो तर, राम्रो आथित्यता छैन । पर्यटकको सम्मान हुँदैन भन्ने गुनासो आउँछ ।
– इलाम आउने पर्यटक तीन खालका हुन्छन् । एउटा इलामलाई नै लक्षित गरेर इलाम घुमेर आउँ भन्ने हुन्छन् । अर्को दार्जिलिङ जाने र फर्कँदा इलाममा निस्केर आउँने भन्ने छन् । तेस्रो भिजिटरजस्ता बिहान इलाम आउने अनि बेलुका फर्कने । तेस्रो घुमन्तेहरुलाई इलाममा राम्रो सम्मान नभएको हो । उनीहरुले धेरै समय नबिताउने भएकाले राम्रो आतिथ्यता पाउँदैनन । उनीहरुले सबै कुरा छिटो र राम्रो खोज्छन् । त्यो पाउन सक्दैनन र सबै कम्प्लेन तिनै भिजिटरहरुले गर्दैछन् ।
इलामलाई प्रत्येक नेपाली र विश्वमा चिनाउनुछ
समृद्धिको आधार पर्यटन-युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मा
नदी नीति बने खोलाबाटै नेपालको आर्थिक समृद्धि
वन गहना होइन, समृद्धिको आधार बनाऔं